Gorira rakura chaizvo asi risinganakidze. Nezve Ubuntu 20.10 | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | | Kugoverwa, General, GNU/Linux, Free Software
Mushure mekutengesa kambani yake yeInternet yekuchengetedza uye asati atanga Canonical, iyo kambani iri kumashure kweUbuntu, Mark Shuttleworth akatora zororo kuInternational Space Station. Akanga ari wechipiri nzvimbo mushanyi munhoroondo. Handizive kuti anozotora zororo rake riini kana COVID ichibvumira, asi Kana iyo nyowani Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla vhezheni inoratidza zvaunofarira izvozvi, ingangove pane inopisa chitubu spa.
Ini ndinotanga nekujekesa kuti kunyangwe iyi vhezheni ichiwanikwa senge yanhasi, vhezheni dzekuyedza dzevagadziri dzakaburitswa kubva muna Chivabvu uye ndanga ndichiishandisa kubva muna Chikumi
1 Gorira rakura chaizvo asi risinganakidze
Gorira rakura chaizvo asi risinganakidze
Ubuntu 20.10 ndeyekukura uye kugadzikana kugoverwa, kure nevakafanotangira vakauya nenhau dzinopokana dzakaunza hurukuro dzisingaperi mumaforamu nemablog. Ingotarisa iyo mascot yakasarudzwa kune iyo Wallpaper, iyo "inoshamisa gorilla" inogona kunge iri chero bald executive mune chero bhodhi rekambani hombe.
Kwete kuti ichi chingori chinhu chakashata, Canonical yakawana nzvimbo yayo mupasi mumusika wekambani unobhadhara zvikwereti, uye musika wekambani haudi shanduko dzinongoerekana dzaitika. Chokwadi chinotaurirwa, vazhinji vashandisi vekumba havaiti.
Chokwadi ndechekuti kunze kwekushandurwa kudiki (kugona kupinda neAnoshanda Directory matsamba) haungawane mune iyi vhezheni chero chinhu chausingawani mairi, semuenzaniso Fedora 33 inobuda mwedzi unouya. Chaizvoizvo Fedora inotora iyo Btrfs faira system nekumisikidza saka ine ruzivo rwekuti Ubuntu haiti)
Muna 2017 Intel technic marketing mainjiniya Brian Richardson akaburitsa muhurukuro iyo iyo kambani inoda UEFI Kirasi 3 kana yepamusoro kutanga mugore razvino nekubvisa rutsigiro rwe "Nhaka BIOS" pamapuratifomu ayo ese. Izvi zvinodzora njodzi dzekuchengetedza, zvinoda vashoma kuvimbiswa, uye kuona kusangana pamwe nehunyanzvi hwamazuva ano.
Nekuda kweshanduko iyi, zvigadzirwa zveIntel hazvingakwanise kumhanyisa 32-bit masisitimu anoshanda kana zvirongwa zvakagadzirirwa ivo natively. Iwe haugone kushandisa zvekare zvigadzirwa, senge RAID HBAs (uye nekudaro akaomarara madhiraivha akaomarara akabatana neaya maHBA), makadhi enetiweki uye kunyange makadhi emifananidzo asiri eUFI anoenderana (Mhando dzese dzakaburitswa pamberi pa2012)
Mwedzi yakati wandei yapfuura vagadziri veUbuntu vakataura kuti kuti vagadzirise shanduko idzi GRUB2 raizove bhootloader rimwe chete kune ese ekuisa midhiya. Vagadziri veFedora vaizoenda kuita sarudzo yakafanana, asi vakasarudza kuzvisiya.
Shanduko iyi inobata mamwe pre-UEFI makomputa. Mukugovera kunoshandisa iyo Calamares installer (Ubuntu Studio uye Kubuntu) iwe unongoona chete yambiro inoratidza kuti iwe gadzira imwe yekuwedzera. Asi, izvo zvinoshandisa Ubiquity, kana iwe uine imwe sisitimu yekushandisa pane rakaomarara diski, unogona kugashira mhosho meseji uye iyo yekumisa inomira.
Nenzira, kana iwe uine komputa yekare ndinokurudzira kuti iwe ugadzire iyo yekuisa pendrive neUNetbootin. UNetbootin inozvisarudzira yega maitiro ekugadzira yekumisikidza svikiro kuti udzivise matambudziko aungave uchishandisa mamwe maturusi.
Iyo GNOME desktop ikozvino inotibvumidza isu pachedu kuronga maficha ekushandisa padhibhodhi kudhonza uye kudonhedza uye inodzosera sarudzo yekutangazve mumenyu yekudzima mubhawa yepamusoro yekurudyi.
Sarudzo mbiri dzinozokosheswa nevashandisi veLaptop kugona kugovera isina waya netiweki kuburikidza neQR kodhi inoratidzirwa kubva kunetiweki sarudzo uye nekuona iyo pesenti yebheteri iripo kubva kumenu pane yepamusoro bar.
Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla inoshanda nekuda kweLinux 5.8 kernel. Izvi zvinoreva kutsigirwa kuri nani kwe AMD Renoir, ichiwedzera Thunderbolt 4 kubatanidza pamidziyo yeARM, madhiraivha matsva eEFAT, uye nani manejimendi manejimendi.
Ambrose Bierce akatsanangura iyo egoist se "munhu anofunga nezvematambudziko ake pachinzvimbo cheangu" .Mavhiki mashoma apfuura ndaenda grey ndichiedza kutora yangu yekare Hardware uye Ubuntu 20.10 kubvumirana. Muchokwadi, yekumisikidza midhiya iyo ini yandakagadzira nechimwe chinhu kunze kweUNeetbootin inotora maminetsi makumi maviri kubhutsu uye kune Ubuntu mugadziri anopenga achiedza kunzwisisa kuti nei. Asi, sekuwanda kwakaita sarudzo dzakandibata, yangu yechinyakare Hardware idambudziko rangu.. Iwe haugone kuenderera kutsigira zvikwata zvese kwehupenyu hwese.
Kuve ndine chinangwa sekugona kwangu, ndinofanira kusvika pamhedziso yekuti Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla yakasvika padanho repamusoro rekukura, haugone kuwana nhau asi izvo zvinhu zvaunotoziva zvinoshanda zvirinani kupfuura nakare kose.
Kana iwe uri wakasununguka muUbuntu 20.04 hapana zvikonzero zvekuti iwe uchinje, asi hapana zvikonzero zvekuti iwe usadaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Gorilla rakura chaizvo asi risinganakidze. Kutora kwangu Ubuntu 20.10
Yakanaka chinyorwa. Ini ndatova paUbuntu 20.10, sekutaura kwako, shanduko idiki, pamwe kuwedzera, hapana chinokanganisa kugadzikana mune isiri-yemubatanidzwa kana bhizinesi yekushandisa.
Uye chii chawaitarisira? Zvakanaka, sevanhu vepakati vagara vagara vari, nhau dzavanowanzo kuunza, kazhinji kernel uye zvimwe zvishoma, handizive kuti chii chimwe chawaitarisira uye kugadzikana, nekuti sezvazvino uno, iwo epakati distros ayo akapa akawanda matambudziko uye ipapo anga ari maforamu aive akazara mameseji, ayo akapfuura kubva kare kupinda munhoroondo, izvo hazvisi kubva ikozvino. Kana zviri zvemabio, uefi uye neshoko raunotaura kuti ndinotaurirana kanonical, iwe unobatanidzwa zvishoma, ndine maviri pcs a2 uye ndine mwedzi wapfuura, Ubuntu 2010 yakaiswa pamwechete neWindows pasina dambudziko. Ubuntu haimire kutsigira chero komputa kubva pamberi pa20.10.
Iyo yekutanga vhezheni yeUbuntu neUbatanidzwa yaive 10.10, chaizvo makore gumi apfuura.
Uye kana ukaverenga chinyorwa zvakare uchaona kuti chirevo changu chaive
Iyi shanduko inokanganisa VAMWE pre-UEFI makomputa
Ini ndakanyanya kutadza kuisirwa neiyo uefi.
Gadzirisa iyo grub asi sekumisikidza kwakundikana sisitimu haina bhuti.
Kana paine chero munhu ane matambudziko, uyu ndiwo mushumo webug paLaunchpad
Iyo yakawanda data inogona kuwedzerwa, zvirinani
Jose Padilla akadaro
Ndine Ubuntu 20.04 uye zvinondirova kuti nguva zhinji uye nezvinhu zvandinofunga zvakarongeka, kumwe kugadzirirwa kwepazasi kubhawa kwakaiswa pabhawa imwechete asi seyakajairwa, ndakaita shanduko neGnome Shell, iyo yakagadziriswa muna 20.10. ? Ndatenda nechinyorwa, ini ndanga ndisingazive nezve uefi, ini ndatoziva kuti ndisatange nechikwata chekare kungoitika
Pindura José Padilla
Ini handina chero yepazasi bar yakaiswa saka ini handigone kutaura
Ndine urombo kuti handina kunditsanangudza zvakanaka, ndiri kutaura nezve doko rinouya nekusingaperi neUbuntu, mumufananidzo iwe unayo kuruboshwe neniwo asi ndakaigadzirisa neiyo gnome shell extensions kuitira kuti ive pakati uye iwedzere sezvo ini open mashandiro, chinhu ndechekuti nguva zhinji zvinowanzoitika kwandiri sekunge zvakaiswa pane iyo yaunayo mumufananidzo imwe diki sezvandinozvigadzirisa uye ndinofanira kutangazve gnome ndichishandisa alt + f2 uye ndinonyora r
Pindura kuna jose padilla
Ok, kana ndikawana nezve chimwe chinhu, ini ndinotumira
Jose Leal akadaro
Ini ndichavimba newe uye mangwana mangwanani ndichagadzirisa
Pindura kuna Jose Leal